Ciid Mubaarak – Caalamka Islaamka oo maanta laga xusayo munaasabada Ciid al adhxa; Warar ku saabsan sidii looga ciiday gobollada Somaliya. – Radio Daljir
Nofeembar 6, 2011 12:00 b 0
Ciid Mubaarak – Caalamka Islaamka oo maanta laga xusayo munaasabada Ciid al adhxa; Warar ku saabsan sidii looga ciiday gobollada Somaliya. http://daljir.com/
Talyaha saldhiga dhexe ee Garowe Aadan Muuse Jaamac oo ka warbixiyay hawl-galo ay ciidanka ammaanka ka sameeyeen magaalada Garowe